ကွန်ဇာမြစ် - ဝီကီပီးဒီးယား
ကွန်ဇာမြစ်သည် အင်ဂိုလာနိုင်ငံရှိ အရှည်ဆုံးမြစ်များထဲမှ တစ်စင်းဖြစ်ပြီး မြို့တော် လုအန်ဒါတောင်ဘက်မှနေ၍ အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာအတွင်းသို့ စီးဝင်သည်။
မြစ်ဝမှနေ၍ ၁၅၀ မိုင် (၂၄၀ ကီလိုမီတာ) ခန့်အထိ သင်္ဘောများသွားလာနိုင်ပြီး လူအန်ဒါမြို့တောင်ဘက် ၆၀ ကီလိုမီတာ (၃၇ မိုင်) တွင် တည်ရှိသည်။ ၎င်း၏ မြစ်လက်တက်များထဲတွင် ကုတေတိုမြစ်နှင့် လုကာလာမြစ်တို့ပါဝင်သည်။
မြစ်၏ အောက်ပိုင်းလမ်းကြောင်းများသည် အင်ဂိုလာမြောက်ပိုင်းသို့ ပေါ်တူဂီများ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့သည့် မူလလမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။
မာလန်ရှီပြည်နယ်ရှိ ကာပန်ဒါဆည်ကို ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် တည်ဆောက်ပြီးစီးခဲ့ပြီး ဒေသအား ရေအားလျှပ်စစ်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ခဲ့ပြီး ထိုဒေသ၏ စိုက်ပျိုးရေးအား ကူညီပေးနိုင်ခဲ့သည်။ တည်ဆောက်လျက်ရှိသော လောက်ကာဆည်နှင့်အတူ ကမ်ဘမ်ဘီရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံသည် ထိုမြစ်ပေါ်တွင်တည်ရှိသည်။ ‌Barra do Kwanza(ကွန်ဇာမြစ်ဝ) သည် ဂေါက်ကွင်းများအပါအဝင် ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ တဖြည်းဖြည်းချင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခဲ့သည်။
Nossa Senhora da Victoria ဘုရားကျောင်းသည် ကွန်ဇာမြစ်ကမ်းပေါ်ရှိ မာဆန်ဂါနူမြို့၊ ကွန်ဇာ‌-နော်တီပြည်နယ်တွင် တည်ရှိသည်။
သိပ္ပံနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကွန်ယက် ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် ဖော်ပြထားသော စာတမ်းများအရ အင်ဂိုလာမြစ်တွင် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲ ကြွယ်ဝစွာတွေ့ရှိရသည်ဟု ဆိုကြသည်။ အင်ဂိုလာ၏ ပထမဆုံးသော ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲစာရင်းတွင် ကွန်ဇာမြစ်တွင်း၌ ငါးမျိုးစိတ်ပေါင်း ၅၉ ထိသာ တွေ့ရှိခဲ့သည်။ အမျိုးသား ငါးလုပ်ငန်းသုတေသနဌာနနှင့် အဏ္ဏဝါဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲလေ့လာရေး တောင်အာဖရိကအင်စကျူတို့မှ သုတေသနပညာရှင်များ၏ ပြောဆိုချက်များအရ မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာ စမ်းသပ်မှုများမှတဆင့် မျိုးစိတ်သစ်များကို ထုတ်ဖော်နိုင်လိမ့်မည်ဟု ဆိုကြသည်။
အင်ဂိုလာနိုင်ငံ၌ အသုံးပြုသော ငွေကြေးဖြစ်သော ကွန်ဇာသည် ထိုမြစ်ကို အစွဲပြု၍ ပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုမြစ်နှင့်အမည်တူသော ပြည်နယ်များဖြစ်သည့် ကွန်ဇာနော်တီ("Cuanza Norte"(မြောက်ကွန်ဇာ))နှင့် ကွန်ဇာဆိုး ("Cuanza Sul"(တောင်ကွန်ဇာ)) ဟူ၍ ရှိသည်။
↑ "Sub-Saharan Africa news in brief: 13–25 March, 2008". SciDev.Net (website). Accessed May 2010.
↑ Theroux၊ Paul (30 May 2013)။ The Last Train to Zona Verde: Overland from Cape Town to Angola။ Penguin Books Limited။ ISBN 9780241965139 – via Google Books။
"Coanza" ၊ 'Encyclopædia Britannica, 9th ed., Vol. VI၊ New York: Charles Scribner's Sons၊ 1878၊ p. 81 .
ကိုဩဒိနိတ်: 9°21′S 13°09′E﻿ / ﻿9.350°S 13.150°E﻿ / -9.350; 13.150
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကွန်ဇာမြစ်&oldid=698174" မှ ရယူရန်